लुम्बिनीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार, को-को थपिए मन्त्री ? – Nepal Press
लुम्बिनीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार, को-को थपिए मन्त्री ?
२०७८ वैशाख २१ गते २१:०६
रूपन्देही । पुनःनियुक्तिपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना नियुक्ति गरेको र केही जिम्मेवारी हेरफेर गरेका हुन् ।
अब प्रदेश मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय भएको छ। थपिएकाहरुमा चेतनारायण आचार्य आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, भोजप्रसाद श्रेष्ठ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री बनेका छन् ।
यसअघि थपिएका मन्त्रीमध्ये हरिप्रसाद रिजाललाई ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, कल्पना पाण्डेलाई उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रकाशित: २०७८ वैशाख २१ गते २१:०६